यस्तो छ डा केसीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था
काठमाडौं–डा। गोविन्द केसीमा निमोनियाको समस्यासँगै अक्सिजन र सेतो रक्तकोषिका (डब्लुबिसी) को कमी देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
शुक्रबारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको आइसियूमा राखिएका केसीको देब्रे फोक्सोमा निमोनियाको संक्रमण छ, जसको उपचारका लागि स्लाइनमार्फत एन्टिबायोटिक चलाइएको उपचारमा संलग्न डाक्टरले बताए ।
केसीको रगतमा अक्सिजनको मात्रा घटेको छ । चिकित्सक टोलीले अक्सिजन दिने प्रयास गरे पनि केसीले मानेका छैनन् । डब्लुबिसीको मात्रा निकै घटेकाले निमोनियाको संक्रमण फैलिने खतरा रहेको डाक्टरले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकको आइतबारको अंकमा यो खबर छापिएको छ ।
माघ ६, २०७५ मा प्रकाशित
शिक्षक हुन अब दुईवटा परीक्षा दिनुपर्ने
ओली–माधव नेपालको झगडा मिलाउन लागिपरे प्रचण्ड
जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण, कहाँ पाइन्छ घर बनाउन ?
शालिकरामले अस्मितालाई परिबन्दमा पारेको सनसनीपूर्ण खुलासा, रवि लामिछाने निर्दोष ?
एकैपटक यतिधेरै कर्मचारी सरुवामा परे, प्रशासन क्षेत्रमा नयाँ तरंग